लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
कृतज्ञताले कसरी स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ?
चिकित्सा विज्ञानले के भन्छ?
हाभर्ड मेन्टल हेल्थ लेटर भन्ने अङ्‌ग्रेजी पत्रिकाको एउटा लेखमा यस्तो छापिएको थियो: “कृतज्ञता देखाउने मानिसहरू अरूको तुलनामा अझ धेरै आनन्दित हुन्छन्‌ भनेर अनुसन्धानले देखाएको छ। कृतज्ञताले मानिसलाई सकारात्मक भावनाहरू विकास गर्न, राम्रा अनुभवहरूमा ध्यान दिन, स्वस्थ रहन, कठिन अवस्थाको सामना गर्न र अरूसितको सम्बन्ध बलियो बनाउन मदत दिन्छ।”
बाइबलले हामीलाई कृतज्ञताको मनोभाव विकास गर्न प्रोत्साहन दिएको छ। यस सन्दर्भमा राम्रो उदाहरण बसालेका प्रेषित पावलले यस्तो लेखे: “तिमीहरू कृतज्ञ छौ भनी देखाओ।” मानिसहरूले बाइबलको सन्देश राम्ररी सुनेकोले तिनले ‘परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाइरहे।’ (कलस्सी ३:१५; १ थिस्सलोनिकी २:१३) आनन्दित भइरहन आकलझुकल मात्र धन्यवाद भनेर पुग्दैन। यसको लागि हामीमा कृतज्ञताको मनोभाव हुनु जरुरी छ। यस्तो मनोभावले आफूलाई ज्यादै महत्त्व नदिन, ईर्ष्या नगर्न र रिस नपाल्न मदत गर्छ। नत्र यस्ता नकारात्मक गुणहरूले अरूसितको सम्बन्ध बिगार्छ र हाम्रो आनन्द खोस्छ।
हाम्रो सृष्टिकर्ताले कृतज्ञता देखाउने सन्दर्भमा राम्रो उदाहरण बसाल्नुभएको छ। उहाँले तुच्छ मानिसहरूलाई समेत कृतज्ञता देखाउनुभएको छ। हिब्रू ६:१० यसो भन्छ: “परमेश्वरको नामको निम्ति देखाएको प्रेम अनि कामलाई बिर्सन उहाँ अन्यायी हुनुहुन्न।” कृतज्ञता नदेखाउने व्यक्तिलाई परमेश्वर अन्यायी ठान्नुहुन्छ।
“सधैं रमाइरहो। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चढाओ।”—१ थिस्सलोनिकी ५:१६, १८.
कृतज्ञताले अरूसितको सम्बन्ध कसरी राम्रो बनाउँछ?
अनुभवले के देखाउँछ?
कसैले उपहार दिंदा, मीठो वचन बोल्दा वा मदत दिंदा मनैदेखि कृतज्ञता व्यक्त गऱ्यौं भने हामीले तिनीहरूको मोल गरिरहेका हुन्छौं। जस्तै, कसैले हाम्रो लागि ढोका खोलिदिएकोमा धन्यवाद दिनु। यसरी तिनीहरूको मोल गरेको देखाउँदा अनजान मानिसले समेत हामीसित मित्रैलो व्यवहार गर्छन्‌।
येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो: “दिने गर अनि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पनि दिनेछन्‌। तिनीहरूले तिमीहरूको पोल्टामा प्रशस्त गरी, खाँदी-खाँदी, हल्लाएर, पोखिने गरी हालिदिनेछन्‌।” (लूका ६:३८) दक्षिण प्रशान्तमा पर्ने भान्वाटुमा बस्ने रोजको अनुभव विचार गरौं।
रोज कान सुन्दिनन्‌। तिनी यहोवाका साक्षीहरूको सभामा जाने गर्थिन्‌। तर त्यहाँ न तिनलाई न त अरू कसैलाई साङ्‌केतिक भाषा आउँथ्यो। त्यसैले तिनले सभाबाट केही लाभ उठाउन सकिरहेकी थिइनन्‌। पछि साङ्‌केतिक भाषा जान्ने एक दम्पती त्यस मण्डलीमा आउँदा तिनीहरूले त्यो समस्या देखे। त्यसपछि तिनीहरूले साङ्‌केतिक भाषा सिकाउन कक्षा सुरु गरे। रोज उनीहरूप्रति साह्रै आभारी भइन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “यति धेरै साथीहरू पाएकोमा म धेरै खुसी छु। उहाँहरू मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ।” त्यो दम्पती रोजको कृतज्ञता र तिनले सभामा भाग लिइरहेको देख्दा आफूले ठूलो आशिष्‌ पाएको महसुस गर्छन्‌। रोजसित कुराकानी गर्नको लागि अरूले साङ्‌केतिक भाषा सिक्न मेहनत गरेको देख्दा रोज तिनीहरूप्रति निकै आभारी छिन्‌।—प्रेषित २०:३५.
“धन्यवादको बलिदान चढाउनेले नै मेरो [परमेश्वर] महिमा गर्दछ।”—भजन ५०:२३.
तपाईं कसरी कृतज्ञ मनोभाव विकास गर्न सक्नुहुन्छ?
हाम्रो सोचाइले हाम्रो भावनालाई असर गर्छ। बाइबलका एक जना लेखक दाऊदले परमेश्वरलाई यसो भने: “म तपाईंका सारा कार्यहरूमा ध्यान लगाउँछु। म तपाईंका हातको काममा विचार गर्छु।” (भजन १४३:५) दाऊद महत्त्वपूर्ण कुरालाई गहिरिएर सोच्ने व्यक्ति थिए। तिनी परमेश्वरको तौरतरिकामा गहिरिएर चिन्तन-मनन गर्थे। यस्तो सोचाइले तिनको भावनालाई असर गऱ्यो। यसले गर्दा तिनमा कृतज्ञ मनोभाव विकास भयो।—भजन ७१:५, १७.
बाइबलले हामीलाई यस्तो राम्रो सल्लाह दिएको छ: ‘जुन कुराहरू सत्य छन्‌, जुन कुराहरू प्रेम गर्न योग्य छन्‌, जुन कुराहरूले राम्रो नाम कमाएका छन्‌, जुन कुराहरूमा सद्‌गुण छ अनि जुन कुराहरू प्रशंसायोग्य छन्‌, तिनै कुराहरूको विचार गरिरहो।’ (फिलिप्पी ४:८) “विचार गरिरहो” भन्ने वाक्यांशले नियमित रूपमा मनन गर्नुपर्ने कुरालाई बुझाउँछ। सकारात्मक कुराहरूमा मनन गरिरह्यौं भने कृतज्ञ मनोभाव विकास गर्न सक्छौं। (g16-E No. 5)
“मेरो मनको चिन्तनले समझ झल्काउनेछ।”—भजन ४९:३, NW.
शेयर गर्ने शेयर गर्ने कृतज्ञता